Hiran State - News: HS:- Madaxa maamulka Hiiraan oo qudbad taariikhi ah ka jeediyey...
HS:- Madaxa maamulka Hiiraan oo qudbad taariikhi ah ka jeediyey...
HS:-Dalka Jabouti waxaa ku sugan wafti balaran oo ka socda Hiiraan kaasi uu hogaaminayey madax maamulka kumeel gaarka ah ee Hiiraan Mudane C/fatah Hasan Afrah .shirka oo maanta galay maalintiisii labaad waxaa qudbad aad u taabatay bulshadii ka soo qeybgashay shirka oo iskugu jiray Hayadii martiogalisay shirka ee USAID iyo diplomasiyiin kala duwan ayaa waxaa la dhihi karaa waxey aheyd qudbadii ugu miisaanka badneyd ee uu muwaadin Soomaaliyeed oo Hiiraan ka soo jeeda waayadan ka jeediyo shir caalami ah.
Masuulkaani ayaa faahfaahin dheer ka bixiyey halgankii dheeraa ee uu maamulkan Hiiraan u soo galay dib u xoreynta dalka iyo sidii loo abuuri lahaa masrax siyaasadeed oo ay ummaddu si wadajir ah aayaheeda uga arrinsato. waxaa uuna goobta ka cadeeyey m/weynaha in bulshada Hiiraan ay juhdi dheer ku bixiyeen dib u xaqiijinta mustaqbalkooda iyo kan ubadkooda iyagoo aan wax taageero ah ka helin DKMG iyo weliba beesha calamka maanta waxii ka horeeyey isagoona qoraal dheer u gudbiyey madaxda aduunka iyo dowladaha daneeya arimaha Soomaaliya oo ay Hiiraan qeyb ka tahay.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa ku nuux nuuxsaday laga soo billaabo aas aasiddii maamulka Hiiraan intii uu socday halgankii ee looga xoreeynaayay alqaacida uusan haba yaraatee wax taageero ah ka helin DKMG Soomaaliya dhagar moogiye. Muddadaas ayuu m/weyne C/fatah sheegay in maamulka Hiiraan iyo ciidamaduba ku tiirsanayeen shacabka oo iyagu buu yiri u huray naf iyo maalba sidii ay isaga qaadi lahaayeen heeryada isla markaana u hanan lahaayeen xornimo taam ah isagoona dhawr jeer shirka dhaxdiisa ugu mahadceliyey bulshada Hiiraan guwooda dal iyo dibad kunool.
Maadaama buu yiri ay muujiyeen geesinimo iyo xadaarad mug leh. Sidoo kale waxaa u si gaar ah ugu mahad celiyay hay’adda USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka (State Department) oo uu sheegay inay muujiyeen sida ay ugu heellan yihiin is garab taagga shacabkiisa xilli buu yiri ay yar yihiin saaxiibada ay reer Hiiraan dibadda ku leeyihiin.
Qudbadda madaxweynaha oo kicisay shucuurta dhammaan ergadii xaadirka ku ahayd madasha, ayaa laga dheehan karay kalsooni aad u weyn maadaama ay kalsoonidaas iskaka xoreeyeen cadowgii heystay Hiiraan, waxaana markii uu qudbada dhameeyey hal mar isla kacay hoolkii uu shirku ka socday iyadoona aad loogu riyaaqay qudbadaas oo wafuud badan aad u taabatay.
Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya madadha shirkane waxey sheegayaan in shirka dhanba muhiimadiisu aheyd si loo ogaado baahida ka jirta Hiiraan maadaama ay Hiiraan tahay meesha kaliya ee ay dagaal kula jiraan TFG iyo Shabaab bulshada Hiiraan walow ay ku kala duiwan yahiin maagca kaliya.
Qoraal dheer oo ka koobnaa in ka badan 35 bog ayaa gacanta loo galiyey diplomaasiyiin aad u daneynayey arinaha Hiiraan. dowlado badan ayaa aaminsan in 21kii sano ee la soo dhaafay dowladahii kumeel gaarka ahaa ee dalka soo maray in ay siiyeen bulshada Hiiraan dhaqaalo kor u dhaafayo amaba ku dhaw 70 Million oo loogu talo galay mashaariicda horumnarinta iyadoo ay dhaqaalahaas aysan waligood soo gaarin Hiiraan. waxaa jiro lacago ku qoran Hiiraan oo la leeyahay waxaa loo marsiiyey dowlada oo ay bixisay QM oo loogu talo galay in lagu dhiso adeegyada aas aasiga ah sida caafimadka, waxbarashada, ciidamada police-ka mana jirta dolar Hiiraan gaaray.
Reer Hiiraanka maanta nool iyaga ayaa laga doonayaa iney hadlaan oo ay aduunyada u sheegan lacagta ay shaqsiyad ku shubteen jeebka ee ay guryaha kaka gateen dibadaha ee aan Hiiraan gaarin waligeed. durbaha waxaa lagu soo waramayaa in madaxa ugu sareeya Hiiraan lagu casuumay dhawr dal walow aan si rasmi ah lo ogeyn kuwa ay yahiin iyo xiliga uu booqan doono.
· admin on June 17 2012 03:42:27 · 0 Comments · 2043 Reads ·
14,633,408 unique visits